अभिनन्दनमा भक्कानिए भक्तजन « Loktantrapost
अभिनन्दनमा भक्कानिए भक्तजन
७ मंसिर २०७३, मंगलवार २०:२२
शनिअर्जुन । अर्जुनधारा जलेश्वरधामका व्यासाचार्य पुष्पलाल निरौलालाई अभिनन्दन गरिएको छ ।
ब्रेन ट्युमरको अपरेशन पछि घरैमा बसी उपचार र आराम गरिरहेका व्यासाचार्य निरौलालाई सोमवार धाममा सुरु हनुमत् महायज्ञको उद्घाटन अवसरमा अभिनन्दन गरिएको हो ।
लामो अवधिपछि ब्यासाचार्य निरौला सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित भएका हुन् । उनलाई गरिएको सम्मान हेर्न दर्शनार्थी लालायित थिए ।
हिड्न र बस्न समेत असमर्थ उनलाई आयोजकले समारोहको मञ्चमा आसन ग्रहण गराएका थिए । आफ्नो सम्मानमा हर्षित देखिएका उनले दर्शक दीर्घामा टुलुटुलु हेरिरहँदा परिदृश्य निकै भावुक बनेको थियो ।
डेढ घण्टासम्म मञ्चमा बसेका उनले आधा मिनेट सारगर्वित मन्तब्य व्यक्त गरे । बेदको मन्त्रोच्चारणबाट मन्तब्य सुरु गरेका उनले आफ्नो विषयमा बोल्नै नपाई कमजोर स्वास्थ्यका कारण गला अवरुद्ध भएको थियो ।
छोटो मन्तब्यमा उनले धामको विकासलाई अघि बढाउन सबैलाई आग्रह गरेका थिए । उनको भाषणमा स्रोता भावविह्वल भएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुक्तिनाथ धामका पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्यले ब्यासाचार्य निरौलालाई दोसल्ला ओढाएका थिए भने उनैले सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए ।
अभिनन्दन पश्चात समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुक्तिनाथ धामका पीठाधिश्वर स्वामी कमलनयनाचार्यले अर्जुनधारा जलेश्वरधाम प्रकृतिले प्रदत्त पवित्र तीर्थस्थल भएको बताए ।
उनले व्यासाचार्य निरौलाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै निरौलाले धामको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
सोमबार जलेश्वरधाममा बालाचतुदर्शी आगमनको अवसर पारेर ३४ औँ वार्षिक अनुष्ठानको रुपमा श्री हनुमत् कथा तथा रुद्राभिषेक महायज्ञको उद्घाटन गरिएको हो ।
प्रमुख अतिथि समेत रहेका नयनचार्यले लामो इतिहास बोकेको यस जलेश्वरधाम पूर्वको पशुपतिनाथ भएको बताए ।
शिवको वरदान पाएका अर्जुनले प्यासमा छटपटाइरहेका गाईहरूलाई जमिनबाट पानी निकाली प्यास मेटाएको ठाउँ भएको हुँदा यसको छुट्टै महत्त्व रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले धर्म संस्कृति सबैको हो भन्ने भाव दर्शाउन गुरुहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
मन्त्री बुढाथोकीले अर्जुनधारा जलेश्वरधामको उन्नतिमा आफू डटेर लाग्ने दर्शाउँदै अक्षय कोषको लागि रु. १ लाख प्रदनन गरेका थिए ।
अर्का अतिथि क्षेत्र नं. ४ का सांसद प्रेमबहादुर गिरीले अर्जुनधाराको विकासका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले पनि अक्षयकोषका लागि रु. १ लाख प्रदान गरेका थिए ।
पहिलो दिन उद्घाटनको समयमा गुरुकुल अक्षयकोषका संयोजक उद्धव थापाबाट १ लाख, यसोदा निरौला स्मृति प्रतिष्ठानबाट १ लाख, सुधादेवि गट्टानीबाट १ लाख, भानु शिवाकोटीले पिता खडानन्द शिवाकोटीको स्मृतिमा १ लाख, धनमाया चिमरिया (लीला चिमरिया)बाट १ लाख, राजकुमार पोखरेलबाट १ लाख, सुधिर बस्नेतबाट १ लाख, राजेन्द्र थापाबाट १ लाख, सुरेशकुमार अग्रवाल (भद्रपुरे)बाट १ लाख, सूर्य गोपीराम भट्टराईको स्मृतिमा श्रीमाती पवित्रादेवी भट्टराईबाट १ लाख, प्रकाश शिवाकोटी बिर्तामोडबाट १ लाख गरी १४ लाख सङ्कलन भएको संयोजक थापाले बताए ।
सोही दिन चन्द्र÷निरा कट्टेलले ५१ हजार प्रदान गरी गल्ला उद्घाटन गरेका थिए भने छविलाल शिवाकोटीबाट धान्यान्चल र विजनेश साहबाट भूमि दान प्रदान भएको कोषाध्यक्ष मनोज जोशीले जानकारी दिए ।
मूल मन्दिरको ताम्रपत्रका लागि बुट्टाबारी निवासी समाजसेवी लोकबन्धु कन्दङ्वाबाट ५१ हजार, मुक्तिनाथ÷सुशिला सुवेदीबाट ५१ हजार प्रदान गरेका थिए ।
धाम समितिका अध्यक्ष नविन गट्टानीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा पूर्व माननीय केदारमणि ढकाल, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति उद्धव थापा, नयाँ शक्ति झापा संयोजक कुमार क्षेत्री, एमालेका भोला परियार, प्रेस क्लबका अध्यक्ष दिपीन राई, अर्जुनधारा जेसीज अध्यक्ष सार्दुलहाङ ओली, पूर्व अध्यक्ष भूपाल खरेल, संरक्षक मोहन शिवाकोटी, पुष्प रेग्मी, राजेन्द्र थापा, सुरेश भद्रपुरे, व्यासाचार्य गुरु पुष्पलाल निरौला, समाजसेवी देवीभक्त श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
धामका उपाध्यक्ष अम्बिका खतिवडाले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन उद्घोषक विभागका संयोजक चतुर्भुज काफ्ले, धाम महासचिव विष्णु निरौलाद्वयले गरेका थिए ।
महाराजको कथामा झुम्मिए स्रोता
भारत अयोध्याधामका नरेन्द्रराम दास महाराजले हनुमत् कथा लोभलाग्दो ढङ्गबाट पाठ गर्दा उनको स्वर र लयले धर्मानुरागी झुम्मिएका छन् ।
सोमवार उद्घाटन अवसरमा कथावाचक नरेन्द्रराम दासले हनुमानका प्रेरक कथा वाचन गर्दा धर्मप्रेमीहरूले २ घण्टा बितेको पत्तै पाएनन् । हनुमान आफै पनि शक्तिशाली भउको र उनको पाठ र पूजा आराधना गर्दा दैविक शक्ति प्राप्त हुने उनले कथामा रोचक शैलीमा बताउने गरेका छन् ।
नेपालमा थोरै मात्र हनुमत् कथा पुराण लाग्ने गरेको छ । ‘जसले यो कथा सुन्न सक्छ र रुद्राभिषेक महायज्ञमा बस्न सक्छ, उसलाई दैविक शकित प्राप्त हुने छ’–नरेन्द्रराम दास महाराजले भने ।
(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा २०७३ मंसिर ७ गते प्रकाशित)